Liva Andriamanantena · Aogositra 2021 · Global Voices teny Malagasy
Liva Andriamanantena · Aogositra, 2021
Lahatsoratra farany an'i Liva Andriamanantena tamin'ny Aogositra, 2021
Nanatevin-daharana ny Global Voices ho talen'ny Advox i Nanjala Nyabola
Mediam-bahoaka 21 Aogositra 2021
Amin'ny maha talen'ny tetikasa Advox azy dia hitarika ny tatitra momba ny matoandahatsoratra, ny fikarohana, ny fikatrohana ary ny fisoloana vava amin'ny fahalalahana maneho hevitra an-tserasera sy ny zo nomerika i Nanjala.
Oseania 10 Aogositra 2021
"Raha ny kajikajy nataonay, avy amin'ny fanombanana ara-tsiantifika araka ny fatra voaray, dia olona eo ho eo amin'ny 110.000 eo no tratra, saika ny vahoaka Polinezianina iray manontolo tamin'izany."
Mediam-bahoaka 07 Aogositra 2021
Iza no nanatevin-daharana ny GV tamin'iny volana Jolay 2021 iny? Iza ireo tantara nahasarika ny sain'ny mpamaky? Aiza ny firenena ahitana ny tantarantsika be mpamaky indrindra ? Jereo ato amin'ity lahatsoratra ity ny valin'ireo fanontaniana ireo !
Mediam-bahoaka 05 Aogositra 2021
Faly izahay manambara fa niampy mpikambana miavaka roa vaovao ny biraon'ny filankevi-pitantanana.
Azia Afovoany sy Kaokazy 03 Aogositra 2021
Vehivavy iray nokendaina ho faty tao Azerbaijan no niharamboina fahadimy novonoina noho ny fifandirana tamin'ilay nahavanon-doza tato anatin'ny 10 andro lasa.